ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကိုလိုက်ပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း အသွင်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Mud Maid သက်ရှိရုပ်တုကြီး – CharTake
chartake | August 20, 2020 | KNOWLEDGE | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ အရာတွေဟာ တကယ်ရှိတယ် ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြလား? တကယ်တော့ အဲ့ဒီအရာတွေ တကယ်ရှိတယ် ဆိုတာကို ဒီနေ့ဖော်ပြေပေးမယ့် ဆောင်းပါးလေးကနေ တစ်ဆင့် သက်သေပြသွားမှာမို့ ဆက်လက် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်က ကွန်ဝေါ်ကောင်တီမှာ ဧက ၂၀၀ ရှိတဲ့ ဥရောပရဲ့ အကြီးဆုံးဥယျာဉ်ကြီး Lost Gardens of Heligan လို့ခေါ်တဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခု တည်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဥယျာဉ်ထဲကို သစ်ပင် ပန်းပင်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေနဲ့ သ ဘာဝတရားကို ခံစားချင်တဲ့သူတွေ များသောအားဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။
Heligan ရဲ့အတွင်းဘက်မှာတော့ လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ Mud Maid လို့အမည်ရတဲ့ သက်ရှိ ရုပ်တုကြီးတစ်ခုကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရုပ်တုကြီးကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ဒေသတွင်းက အနုပညာရှင် မောင်နှမ ပီတီနဲ့ ဆူဟေးလ်တို့က ဖန်တီး ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီကတည်းက Lost Garden ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့တော့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mud Maid ဆိုတဲ့ ရုပ်တုကြီးက သက်ရှိ ရုပ်တုကြီးဖြစ်ပြီး ရုပ်တုရဲ့ အဝတ်အထည်နဲ့ ဆံပင်တွေက ရာသီတစ်ရာသီ ပြောင်းတာနဲ့ မြက်ပင်၊ နွယ်ပင်၊ရေညှိတွေ ပေါက်လာလိုက်၊ ခြောက်သွေ့သွား လိုက်နဲ့ ရာသီဥတုပေါ် မူတည်ပြီး လိုက်ပြောင်းလဲ တတ်ကြပါတယ် ။ နွေဦးရာသီနဲ့ နွေရာသီမှာ ရုပ်တုကြီးရဲ့ အသွင်အပြင်ပြောင်းသလို ဆောင်းဦးရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီ တွေမှာလည်း ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Lost Gardens of Heligan ဥယျာဉ်မှာ အိပ်ပျော် နေတဲ့ အမျိုးသမီးအဖြစ် တင်စားထားတဲ့ The Mud Maid ရုပ်တုကြီးအပြင် အခြား ရုပ်တုကြီးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ The Mud Maid ရုပ်တုကြီးက ဥယျာဉ်ကြီးမှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အနှစ်သာရကို ယူဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Mud Maid ကို သစ်နဲ့ ဘောင်ခတ်ပုံစံဖော်ပြီး ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်တီးပုံဖော်တဲ့ မောင်နှမ (၂) ဦးက အဲဒီ ဘောင်ခတ် ပုံဖော်ထားတဲ့ပေါ်မှာ စေးကပ်တဲ့ ရွံ့တွေကို အသုံးပြုထား ပါသေးတယ်။ ရုပ်တုရဲ့ မျက်နှာကိုတော့ ရွံ့၊ သဲ၊ ဘိလပ်မြေ တို့နဲ့ ပြုလုပ်ထား ပါတယ်။ အစကသစ်ကပ်မှော် ပေါက်လာဖို့အတွက် ဒိန်ချဉ်နဲ့ အုပ်ထား ခဲ့ ပါသေးတယ်။
Maid ရဲ့ဦးခေါင်းက Montbretia အပင်နဲ့ပြည့်နေပြီး အဝတ် အနေနဲ့ကတော့ နွယ်ပင်တွေပါပဲ။ Mud Maid ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ မောင်နှမ (၂) ဦးနဲ့ သူတို့တွေ ဘယ်လို လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ပုံမှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
The Lost Gardens of Heligan ကို (၁၈) ရာစုတုန်းက Tremayne မိသားစုက တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ် မတိုင်ခင်က ဥယျာဉ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် ဥယျာဉ်မှူး (၂၂) ဦးကို ခန့်အပ် ထားခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ အခါမှာ ဥယျာဉ်မှူး တော်တော်များများက ရှေ့တန်း ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ် ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ ဥယျာဉ်မှူး အရေအတွက်က လျော့နည်းလာပြီး မြေနေရာကလည်း ယိုယွင်းပျက်စီး လာခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး ဥယျာဉ်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၄၀၀) သက်တမ်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ဥယျာဉ်က နှစ်တိုင်း သက်ရှိ ရုပ်တုကြီးတွေနဲ့ အလည်အပတ်လာရောက်သူ ထောင်ချီကို ဆွဲဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Source ; Thu Ta Myay
Unicode … ရာသီအပွောငျးအလဲကို လိုကျပွီး ထူးထူးဆနျးဆနျး အသှငျပွောငျးလဲတတျတဲ့ အင်ျဂလနျနိုငျငံက Mud Maid သကျရရုပျတုကွီး
ပရိသတျကွီးရေ လဝြကျဆနျးကွယျမတှနေဲ့ မျာဆနျတဲ့ အရာတှဟော တကယျရတယျ ဆိုတာကို ယုံကွညျကွလား? တကယျတော့ အဲ့ဒီအရာတှေ တကယျရတယျ ဆိုတာကို ဒီနဖေ့ျောပွပေေးမယျ့ ဆောငျးပါးလေးကနေ တဈဆငျ့ သကျသပွေသှားမာမို့ ဆကျလကျ ဖတျရပေးကွပါဦးနျော။
အင်ျဂလနျနိုငျငံအနောကျတောငျဘကျက ကှနျဝျေါကောငျတီမာ ဧက ၂၀၀ ရတဲ့ ဥရောပရဲ့ အကွီးဆုံးဥယြာဉျကွီး Lost Gardens of Heligan လို့ချေါတဲ့ ဥယြာဉျကွီးတဈခု တညျရပါတယျ။ အဲ့ဒီ ဥယြာဉျထဲကို သဈပငျ ပနျးပငျတှကေို ခဈြမွတျနိုးသူတှနေဲ့ သ ဘာဝတရားကို ခံစားခငျြတဲ့သူတှေ မြားသောအားဖွငျ့ လာရောကျလညျပတျကွပါတယျ။
Heligan ရဲ့အတှငျးဘကျမာတော့ လဝြကျ ဆနျးကွယျမတှနေဲ့ ပွညျ့နကျနတေဲ့ Mud Maid လို့အမညျရတဲ့ သကျရ ရုပျတုကွီးတဈခုကို တှရေ့မာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီရုပျတုကွီးကို ၁၉၉၇ ခုနဈက ဒသေတှငျးက အနုပညာရငျ မောငျနမ ပီတီနဲ့ ဆူဟေးလျတို့က ဖနျတီး ခဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီကတညျးက Lost Garden ရဲ့တဈစိတျတဈပိုငျး ဖွဈလာခဲ့တော့ တာပဲဖွဈပါတယျ။
Mud Maid ဆိုတဲ့ ရုပျတုကွီးက သကျရ ရုပျတုကွီးဖွဈပွီး ရုပျတုရဲ့ အဝတျအထညျနဲ့ ဆံပငျတှကေ ရာသီတဈရာသီ ပွောငျးတာနဲ့ မွကျပငျ၊ နှယျပငျ၊ရညေတှေ ပေါကျလာလိုကျ၊ ခွောကျသှသှေ့ား လိုကျနဲ့ ရာသီဥတုပျေါ မူတညျပွီး လိုကျပွောငျးလဲ တတျကွပါတယျ ။ နှဦေးရာသီနဲ့ နှရောသီမာ ရုပျတုကွီးရဲ့ အသှငျအပွငျပွောငျးသလို ဆောငျးဦးရာသီနဲ့ ဆောငျးရာသီ တှမောလညျး ပွောငျးသှားတာကို တှရေ့မာ ဖွဈပါတယျ။
The Lost Gardens of Heligan ဥယြာဉျမာ အိပျပြျော နတေဲ့ အမြိုးသမီးအဖွဈ တငျစားထားတဲ့ The Mud Maid ရုပျတုကွီးအပွငျ အခွား ရုပျတုကွီးတှလေညျး ရပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ The Mud Maid ရုပျတုကွီးက ဥယြာဉျကွီးမာ လဝြကျဆနျးကွယျတဲ့ အနဈသာရကို ယူဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ Mud Maid ကို သဈနဲ့ ဘောငျခတျပုံစံဖျောပွီး ဖနျတီးပွုလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။
ဖနျတီးပုံဖျောတဲ့ မောငျနမ (၂) ဦးက အဲဒီ ဘောငျခတျ ပုံဖျောထားတဲ့ပျေါမာ စေးကပျတဲ့ ရှံ့တှကေို အသုံးပွုထား ပါသေးတယျ။ ရုပျတုရဲ့ မကျြနာကိုတော့ ရှံ့၊ သဲ၊ ဘိလပျမွေ တို့နဲ့ ပွုလုပျထား ပါတယျ။ အစကသဈကပျမျာ ပေါကျလာဖို့အတှကျ ဒိနျခဉျြနဲ့ အုပျထား ခဲ့ ပါသေးတယျ။
Maid ရဲ့ဦးခေါငျးက Montbretia အပငျနဲ့ပွညျ့နပွေီး အဝတျ အနနေဲ့ကတော့ နှယျပငျတှပေါပဲ။ Mud Maid ကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ မောင်နမ (၂) ဦးနဲ့ သူတို့တှေ ဘယျလို လုပျခဲ့လဲဆိုတာကို ပုံမာ မွငျတှရေ့မာပါ။
The Lost Gardens of Heligan ကို (၁၈) ရာစုတုနျးက Tremayne မိသားစုက တညျထောငျခဲ့တာဖွဈပွီး ဗွိတိနျရဲ့ ကြျောကွားတဲ့ ရုက်ခဗဒေ ဥယြာဉျတှထေဲက တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ပထမကမ်ဘာစဈ မတိုငျခငျက ဥယြာဉျကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရာကျဖို့ အတှကျ ဥယြာဉျမး (၂၂) ဦးကို ခနျ့အပျ ထားခဲ့တာပါ။
ဒါပမေဲ့ စဈပှဲဖွဈပှားတဲ့ အခါမာ ဥယြာဉျမး တျောတျောမြားမြားက ရတနျး ထှကျခဲ့ရပါတယျ။ ပထမကမ်ဘာစဈ ပွီးသှားတဲ့နောကျမာ ဥယြာဉျမး အရအေတှကျက လြော့နညျးလာပွီး မွနေရောကလညျး ယိုယှငျးပကျြစီး လာခဲ့ရပါတယျ။
နောကျပိုငျးမာ ပွနျလညျ ကောငျးမှနျလာခဲ့ပွီး နာမညျကွီး ဥယြာဉျတှထေဲက တဈခု ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ နဈပေါငျး (၄၀၀) သကျတမျးရပွီးဖွဈတဲ့ ဥယြာဉျက နဈတိုငျး သကျရ ရုပျတုကွီးတှနေဲ့အလညျအပတျလာရောကျသူ ထောငျခြီကို ဆှဲဆောငျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ Source ; Thu Ta Myay